बाल कार सीट कार मा परिवहन समयमा बच्चाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको छ। तर यो लागि यो ठीक स्थापित गर्न आवश्यक छ। स्थापना समयमा त्रुटिहरू बच्न एक बन्धन isofix छ जो एक बच्चा कार सीट प्रयोग गर्नेछ। जर्मनी मा एक अध्ययन अनुसार, बेल्ट बन्धन संग बच्चा कार सिटको बारेमा 60% सही दुर्घटनामा समयमा स्थापना छोराछोरीको महत्वपूर्ण घाइते गर्न सक्छ। नियमित कार सीट बेल्ट खातामा झुकाव र बेल्ट तनाव लिएर निश्चित गर्न आवश्यक छ। कार सीट टेप सुरक्षित र अगाडी उड एउटा दुर्घटना वा आपतकालीन ब्रेक लगान को समयमा कार सीट अनुमति हुनेछ जो ताला क्लिप संग सज्जित हुनुपर्छ। एक बन्धन isofix छ जो कुर्सी, मात्र सही स्थापित गर्न सकिन्छ। साथै, बन्धन isofix, नियमित बेल्ट समस्या को अपर्याप्त लम्बाइ यो एकदम साधारण मोटर चालकहरुलाई छन् संग, निर्देशन अनुसार कार सीट समाधान गर्न अनुमति गर्दैन निर्णय।
पहिलो पटक isofix बढते मानक लागि द्वारा प्रस्तावित थियो मानकीकरण लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन 1990 मा आईएसओ। यो अनिवार्य छैन, तर हरेक वर्ष थप लोकप्रिय बन्दैछ। isofix कार सीट बन्धन पछि सानो यात्री एक दुर्घटना समयमा थप विश्वसनीय सुरक्षा गर्न। कारण हासिल छ के?
बन्धन isofix वाहन शरीर सीधा कठोर संलग्न सीट प्रदान गर्दछ। भित्र, कार एक विशेष कोष्ठ माउन्ट, उनि लगभग सबै आधुनिक मोडेल कार संग सुसज्जित छन्, तर घरेलू कार isofix बन्धन बिना उपलब्ध छन्। वाहन शरीर संग स्टेपल, एकल एकाइ गठन तिनीहरूले फिर्ता फिर्ता तकिया र सीट बीच स्थित छन् र तिनीहरूको सही स्थानहरू विशेष लेबल फेला नामित छन्। कार सीट मा कोष्ठक, एउटा क्लिक जारी संग सजिलै, कोष्ठक मा स्न्याप कि ताले छन्। स्थापना सुविधा र क्षति ताले देखि कार भित्री अस्तर सीट विशेष प्लास्टिक dilators संलग्न छन् जोगाउन। कार सीट छोड्ने क्रम मा, तपाईं बस isofix बन्धन अनलक कि बटन वा levers मा क्लिक गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, दुर्घटना को समयमा बच्चा सीट कुनै पनि दिशा मा सार्न छैन, र स्थानमा दृढ खडा हुनेछ।
मोटर चालकहरुलाई को आमाबाबुले बीचमा यो कारण कि विश्वास छ कठोर युग्मन कार भित्री संग सीट बेल्ट प्रभाव मा जो अतिरिक्त चोट सक्छ बच्चा को छाती, मा धेरै दबाव पार्छन्। तर दुर्घटना परीक्षण को परिणाम कार सीट दृढ भएको दुर्घटनामा को समयमा निश्चित छ भनेर प्रमाणित, राम्रो यसलाई आफ्नो यात्रु सुरक्षित राख्दछ।
एक बन्धन isofix छ जो बाल कार सीट, isofix प्रणाली संग सुसज्जित छैन वाहन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोष्ठक, ताले विस्तार र कुर्सी को सीट को grooves मा लुकाउन सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, प्रयोग गरेर बच्चा संयम स्थापना गर्न तीन-बिन्दु बेल्ट मिसिन को। तर यो बहुमुखी बाबजुद, एउटा गाडी छैन हरेक सीट स्थापित गर्न सकिन्छ। खरीद अनुकूलता मोडेल कार सिट र कार ब्रान्डहरु लागि निर्देशनहरू हेर्न गर्नुपर्छ अघि त कार को पछिल्लो सीट र झुकाव को कोण को उचाइ, कार सीट कन्फिगरेसन संग मेल खाँदैन सक्छ।
"Saiga-20"। विनिर्देशों, फोटो
यो भित्री uterine endometriosis के हो?
"लेनोभो 90 संग"। मोबाइल फोन लेनोभो S90। वर्णन, सुविधा र समीक्षा
GEF पाठ टाइप गर्नुहोस्। एउटा पाठ लागि आधारभूत आवश्यकताहरू
मस्तिष्क र आफ्नो कार्य को भागहरु: संरचना, सुविधा र वर्णन
के खुजली कान
कोरल होटल बहिआ प्रिन्सिपे Playa4* (स्पेन, मलोर्का): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा